Thintela i-WhatsApp ekugcineni imifanekiso kunye nevidiyo kwi reel yakho | IPhone iindaba
Thintela i-WhatsApp ekugcineni imifanekiso kunye nevidiyo kwi-reel yakho
Ukuba uthembekile kuWhatsApp kwaye uqhuba incoko yakho ngesixhobo, unokuba nayo Umhlobo oqhelekileyo othumela iifoto kunye neevidiyo ezihlekisayoOkwangoku zinokubangela ukuba uhleke, kodwa zigcinwa kwifoto yakho ye-iPhone kwaye, kancinci kancinci, kukushiya ungenandawo yemifanekiso enomdla ngokwenene kuwe.
Nje ukuba sifake i-WhatsApp kwi-iPhone yethu, isicelo ngokuzenzekelayo simisela uthotho lwamaxabiso asisiseko, amaxabiso asithandiyo kwaye sinyanzelekile ukuba sitshintshe. Enye yezona zinto zicaphukisayo esizifumana ngokwendalo kuWhatsApp yile Ukugcina ngokuzenzekelayo iividiyo kunye neefoto kwi-reel yethu.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwakho uzifumana kwiqela labahlobo, usapho, imibutho, amaqela esikolo ... apho inani elikhulu leevidiyo kunye nemifanekiso kwabelwana ngazo. 99% yomxholo ekwabelwana ngawo kweli qela kunokwenzeka asinamdla wokuyigcinaisagcinwe kwi reel yethu.
Ngethamsanqa, i-WhatsApp isivumela ukuba siqwalasele usetyenziso ukuze isebenze ngokugcina ngokuzenzekelayo imifanekiso kunye nevidiyo kwi-reel yethu. Olu khetho, olunokuthi luvunyelwe ngokwendalo, isivumela ukuba sikhethe ukuba loluphi uhlobo lomxholo esifuna ukuwugcina kwi reel yethu.
Umsebenzi wokugcina ngokuzenzekelayo weWhatsApp hayi kuphela sebenzisa indawo yokugcina kwisixhobo, kodwa kwakhona Sebenzisa inqanaba ledatha yakho yeselula. Zombini zizizathu ezifanelekileyo zokunciphisa olu khetho.
Isisombululo Ilula kakhulu kwaye ukuba awuyithandi, unokuhlala wamkela ukugcina la manyathelo kwakhona.
1 Khubaza ngokuzenzekelayo gcina iifoto kunye neevidiyo kwi-iPhone
2 Ungazigcina njani iifoto zikaWhatsApp kwenye ifolda
3 Ukukhupha iifoto ze-WhatsApp kwi-iPhone ukuya kwi-PC
3.1 Ukuba asinakhontrakthi yendawo ye-iCloud
Khubaza ngokuzenzekelayo gcina iifoto kunye neevidiyo kwi-iPhone
Okokuqala, ngaphambi kokwenza le nyathelo, kufuneka sikhumbule ukuba xa usenza ugcino oluzenzekelayo lweefoto kunye nevidiyo kwi-iPhone ayichaphazeli amaqela kuphela, kodwa nakwiincoko esinazo nabanye abantu, nokuba sinaye utata, umama, iqabane, unyana, umhlobo ...
Ukuba sifuna ukukhusela itheminali yethu kugcwele iifoto kunye nevidiyo zobubhanxa ekwabelwana ngazo kumaqela e-WhatsApp apho sikhona, kufuneka senze la manyathelo alandelayo:
Okokuqala, xa sele sivule i-WhatsApp, siya kukhetho lwe Cwangcisa, ebekwe kwikona esezantsi ekunene yesicelo.
Emva koko cofa apha registrationError
Ngaphakathi kwimenyu yokuxoxa, sinezinto ezahlukeneyo esinokukhetha kuzo. Kuzo zonke ezikhoyo kufuneka sicime utshintsho Gcina kwiifoto.
Ngale ndlela, sakuba silwenzile lungasebenzi olu tshintsho, zonke iifoto kunye neevidiyo osithumelele zona ayizukugcinwa ngokuzenzekelayo kwi reel yethu. Ukuba sifuna ukuzigcina, kuya kufuneka silandele la manyathelo alandelayo:
Nje ukuba sikumfanekiso esifuna ukuwugcina, sicofa kuwo ukuze iboniswa kwisikrini esipheleleyo.
Emva koko, cofa kwiqhosha Yabelana, ebekwe kwikona esezantsi ekhohlo.
Ukusuka kwiinketho ezahlukeneyo ezibonisiweyo, sikhetha Gcina. Ngale ndlela, umfanekiso okanye ividiyo yale ncoko ye-WhatsApp iya kugcinwa kwi-reel yethu.
Ungazigcina njani iifoto zikaWhatsApp kwenye ifolda
iOS, ngokungafaniyo ne-Android, beka imifanekiso nganye engxoweni enye Ekupheleni kwesixhobo sethu, into enokuba ilungile okanye imbi ngokuxhomekeke ekusebenziseni kwethu kwisiphelo sethu nokuba ingaba asithandi ukuba iifoto zilandelwe kakuhle.
Ngelixa ukwi-Android, iifoto zikaWhatsApp kunye neevidiyo zigcinwa kwifolda kaWhatsAppKwi-iOS, yonke imifanekiso igcinwe kwifolda efanayo, ekuphela kwendlela yokukwazi ukwahlula abanye kukusebenzisa ialbham enegama leWhatsApp elenziwa ngokuzenzekelayo sisicelo xa siyifaka.
Nje ukuba singaphakathi kwi-albhamu kaWhatsApp, siya kufumana zonke iifoto kunye neevidiyo esizifumene ngokuthumela imiyalezo, ethi ivumela ukuba senze iintshukumo kunye nabo ngokudibeneyo Ungazicima njani, wabelane ngazo, uzitshintshe kwi-albhamu ...
Ukukhupha iifoto ze-WhatsApp kwi-iPhone ukuya kwi-PC
Ukuba ufuna ukwenza ikopi yogcino lwayo yonke imifanekiso kunye nevidiyo kwifowuni yakho ukuyigcina kwikhompyuter okanye kwinkqubo yokugcina yangaphandle, sinazo iindlela ezahlukeneyo zokwenza.
Ngokungagcini iifoto ze-WhatsApp kwiifolda ezahlukeneyo, kodwa kwii-albhamu ezenziwe ngokuzenzekelayo xa usongeza ithegi kwisithombe, Asinakho ukuqhagamshela i-iPhone yethu kwi-PC kwaye sikope loo folda okanye i-albhamu ekuthethwa ngayo.
Ngethamsanqa sinezindlela ezahlukeneyo zokuba sikwazi ukwabelana ngemifanekiso ye-albhamu ye-WhatsApp nathi ukuze sikwazi ukuyikhuphela kwi-PC yethu njengabanye abantu. Nangona kunjalo, kweli nqaku sikubonisa kuphela indlela ekhawulezayo kunye kukhululeka ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukwenza njalo, kuba usetyenziso olusinika lo msebenzi zihlala zihlawulwa.
Ukuba sisebenzisa inkonzo yokugcina i-iCloud, inkqubo iyakhawuleza, kuba zonke iifoto kunye neevidiyo sele zikho kwi-iCloud. Ukuze sikwazi ukufikelela kuzo nge-iCloud kwaye sizikhuphele kwikhompyuter yethu, kufuneka nje landela la manyathelo:
Sisiya kwi Ialbhamu kaWhatsApp ziphi zonke iifoto kunye nevidiyo esifuna ukwabelana ngazo.
Emva koko, cofa kwiqhosha Yabelana ebekwe kwikona esezantsi ekhohlo kwesikrini.
Okokugqibela sicofa ukhetho Khuphela ikhonkco kwi-iCloud. Ikhonkco liyakwenziwa efana nale https://www.icloud.com/photos/#06_dH1mCq9ZSSpNYWS_kRaADCEQ.
Le khonkco ukuba iya kufumaneka inyanga ukukhuphela kunye nokufikelela kuye nabani na, kuba akukho mfuneko yokuba ungene ngalo naliphi na ixesha ukuze ungene kuyo.
Ngale khonkco, ethi singayithumela ngeposi, sinokufikelela kuzo zonke iifoto kunye nevidiyo zeWhatsApp ezingaphakathi kwi-albhamu yeWhatsApp.
Ukuba asinakhontrakthi yendawo ye-iCloud
Ukuba asinasivumelwano sokugcina indawo kwi-iCloud, ngaphaya kwe-5 GB esisinika yona simahla, le nkqubo icotha kakhulu, kuba isixhobo sethu siya kuba luxanduva lokulayisha kwi-iCloud yonke imifanekiso ebesiyikhethile ngaphambili, exhomekeke kwinani elikuyo kunye nonxibelelwano lwe-intanethi esinalo, elinokuhlala ixesha elingaphezulu okanye elincinci.
Umda kuphela esiwufumanayo ukuba asinayo indawo yokugcina simahla enesivumelwano ne-iCloud kukuba sinokwabelana ngeefayile kunye nevidiyo kwi-reel yethu iyonke ungagqithi kwi-200 MB.
I-WhatsApp iye yaba elona qonga lomyalezo lisetyenzisiweyo kwihlabathi liphela (nangona ayisiyiyo eyona ilungileyo kwesi sizathu, iTelegram sisicelo somyalezo esinika elona xabiso longezelelweyo) kwaye yayiyeyona nto iphambili ukuba iSMS iyekile ukuba yindlela eluncedo kakhulu yokunxibelelana nabaqhubi beefowuni, ngakumbi ukuphela konyaka , apho kwathunyelwa izigidi zemiyalezo ebhaliweyo.
Kodwa i-WhatsApp ayisiyeyona ndlela iphambili yokunxibelelana nabasebenzisi abangaphezulu kwesigidi se-1.500 abayisebenzisa yonke imihla, kodwa ikwayindlela ephambili yokwabelana ngemifanekiso kunye nevidiyo ngokukhawuleza nangokulula, iividiyo ukuba asilumkanga zihlala ziphela. phezulu kwi reel yethu. Siyathemba ukuba ngesifundo sethu amanyathelo oza kuwalandela ukuthintela u-WhatsApp ekulondolozeni imifanekiso kunye neevidiyo kwi-reel yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Thintela i-WhatsApp ekugcineni imifanekiso kunye nevidiyo kwi-reel yakho
Ibhere yamaYuda sitsho
Mka. Yeyiphi into entsha. Ewe eli phepha mihla le linikezela ngamanqaku angcono. Qaphela isigqebelo ...
Phendula kwiBhere yamaYuda
Ekuqaleni, bendicinga kwa into enye, kodwa ke ndakhumbula amaphephandaba ezemidlalo, ekufuneka aphume ntsasa nganye egcwele iindaba, nokuba akukho zindaba ... Ngapha koko, mhlawumbi umntu othile ebengayazi kwaye unjalo wonwabile
Ngokwenene uCarmen, ingaba yinto ehlekisayo le?
Okwangoku kwaye unegalelo kuloo "bullshit" yolwazi, ayifanelekanga ukupapasha inqaku.
Phakathi kukaCristina kwaye ngoku u ... kukho into esilelayo kule webhusayithi !!
Kule webhusayithi, kunikwa iindaba ze-iPhone, zihlala ziyimicimbi yangoku, kodwa kukho abo bangenayo kuba bathenga nje i-iPhone kwaye baqala ngezicelo eziqhelekileyo kunye nomnqweno womntu omtsha. Ngale nto ndiyathetha ukuba ndiyavuya ukuba uyazi, kodwa ayinguye wonke umntu oyenzayo kwaye akukho mntu kule bhlog ubhalela umfundi omnye, kodwa kuluntu apho kuya kubakho abo bafuna olu lwazi kunye nabo bangenalo.
Ngokumalunga nokwahlulwa kwabesini esithile, kuyadinisa ukuba uhlala ugxeka amantombazana xa siphumelele isikhundla apha ecaleni kwamanye amaqabane angamadoda, le ntetho ithi kakhulu ngawe kunale webhu.
Ukubulisa kwaye njengesiqhelo, enkosi ngokuphawula.
UJorker akenzanga luvo ngesini, uxelele inyani. Ukuba wena noCristina ngabona bakhupheli babi kakhulu akunanto yakwenza nesondo, yinto eqondakalayo leyo. Carmen, ungakhathazeki, akukho mntu uxoxa ngendawo oyifumene phakathi kwabantu.
Molo carmen. Ndingathanda ukwazi ukuba kutheni ungenakuvelisa isoftware ukuze ii-iPhones zigcine iifoto zikaWhatsApp kwifolda eyahlukileyo kwiifoto ezenziwa ngekhamera ye-iPhone. Siyintoni isizathu?
Kwam ziziindaba ezimnandi, kuba jonga ukuba ndikhangele kwi-Intanethi ukuze ndingabinazo iifoto ezingcolileyo abadla ngokukuthumela ngazo ngu-Whatsaap kwaye ziye ngqo kwi-reel kwaye kunjalo xa uzama ukubonisa ifoto eqhelekileyo kufuneka hambani niye kulwa
yintoni inkunzi yenkomo yearitculo ...
Ewe kuye kwandinceda, kuba bendingamazi. Enkosi.
U-Elkin gomez perez sitsho
Enkosi ngolwazi, bendisele ndiyazi kodwa ndiyazi ukuba baninzi abasebenzisi abatsha okanye abangenawo amava amaninzi kwi-iOS kubo eli nqaku eliza kuba luncedo kakhulu. Kulabo bakhathazekileyo okanye sele besazi okanye abanamdla kwinqaku ... Nceda ... UNGAYIFUNDI KUNYE NOKUPHEPHA UKULAHLEKA IXESHA LAKHO ELIXABISEKILEYO ... Kufuneka sihloniphe ixesha kunye nokuzinikezela kwabo bonke abantu abapapasha amanqaku kule webhusayithi kwaye ungenzi izimvo ezikrwada, ezesini, ezingathandekiyo okanye ezingasebenziyo ukuphucula eli phepha lihle.
Phendula uElkin Gomez Perez
Ukuba ngokwenene awuyazi le ndlela, kungenxa yokuba awuzange usebenzise i-WhatsApp. okanye awuzange ube ne-smartphone ekwaziyo ukusebenzisa i-WhatsApp kuba olu khetho lufumaneka kuzo zombini ii-IOs, i-Android, i-BB, iWP, iNokia ...
Inqaku elilungileyo, kwabo bebengazi, sele besazi kwaye kwabo baziyo, baqinisekise ...
Masikhumbule iziseko, le webhusayithi inikezelwe kwi-iPhone, nantoni na enento yokwenza nayo, esisiseko okanye enamava, uya kuyibona ijinga apha ...
Ayizizo zonke iingcali, ayingabo bonke abasebenzisi abadala, imbeko kubo ukuze bonwabe ...
Kwabo bathanda ukugxeka umsebenzi womnye umntu, ngenxa yokuba bengazenzeli iphepha labo le-WEB, babhale into ekufanele ukuba inomdla kunye nenoveli, khangela umntu oza kubamkela abo bathintela intengiso eninzi ye-junk, enomgangatho obonakalayo ongcono. kwaye kukuthanda "WONKE UMNTU". Ahhhh, ungalibali icandelo lamagqabaza kwaye ungamkeli ukugxeka kwababhali okanye izizathu ezilula zokubhala okungalunganga.
Kule meko, akukho kubi ukuba amaxesha ngamaxesha zibekwa ezi ndidi zamanqaku, kuba njengoko uCarmen esithi ayinguye wonke umntu oqhekezayo kunye ne-iPhone kwaye akukho nto yenzekayo ukukhumbula okanye ukufundisa ezinye izinto, ezibonakala ngokucacileyo kwabanye, inokuba nceda abanye
Kuzo zonke iBhola eziNgekhoyo ezigxeka apha ukuba Abasetyhini babhala iiChorreadas ezicocekileyo ezenziwayo ngokukhuhla le Post Llegenle hayi i-MMEN.
Okokuqala kwisihloko ayichanekanga okanye ayicacanga. Ngendlela othetha ngayo, awukunqandi ukugcina iifoto kwi-reel yakho, kuba awuzukuzikhuphela, de ube uyinike ividiyo / ifoto nganye ukuba uyikhuphele. Kodwa xa oku kwenziwe, kuyabagcina kwi-reel kunjalo.
Kwaye malunga neendaba, uhlala ushiywe lixesha, ukopa kwaye utsala ngendlela embi njengomguquleli ... Umzekelo, umdlalo uNacho athetha ngawo ubesevenkileni iveki ubuncinci. Malunga neSeva yokuQaphela ukuZiphatha, kwiintsuku ezi-4 ezidlulileyo ndiyifundile kwi-appleinsider…, njl njl
Uxolo, umdlalo awuveli ubuncinci kwiveki ephelileyo, ngowama-17/7. Uxolo.
Ewe, kulungile, iAitor, ngoku uye uyisonge, ukuba kobu bomi ngekhe ungxole kakhulu kuba emva koko kwenzekayo.
Kwaye kwenzeka ntoni? Ayinyani ukuba lo mdlalo uvela kwiveki ephelileyo? Ndikubonile ukuphononongwa kwalo mdlalo kwiveki ephelileyo. Oko kungathethi ukuba iintsuku ze-7 zidlulile, akukho nto iyenye, bendifuna ukucacisa. UMazantsi? Nciphisa umdiliya.
Molo Aitor, okoko undikhankanyile kwinkcazo yakho, ndiza kuzama ukukuphendula. Uhlalutyo lwezicelo alukho okwangoku, lumalunga nokukwazi ukuqaqambisa ii -apps kunye nemidlalo ekwiVenkile yeApple nokuba bahlala ixesha elingakanani kuyo. Xa sizama ukuhlalutya ububodwa, sibonisa njalo, okunye akufuneki kubenjalo.
Ngaphezulu, ndiyathanda ukutsala ithala leencwadi kwaye amaxesha ngamaxesha ndibalaselisa ubuqaqawuli obudala obungasekhoyo kwizikhundla kwaye ngenxa yomgangatho wayo, kufanelekile ukuba ikhunjulwe kwabo basebenzisi ababengayazi ngelo xesha.
Ndithe, ungalindelanga ukuba ihlalutye usetyenziso olufike nje kwiVenkile yeApple kuba ngaphandle kwamatyala anqabileyo okanye iimeko ezithile, ayizukwenzeka. Umsebenzi wethu unolwazi kwaye ngokwamaqela eendaba ezinxulumene ne-iPhone kunye nokusingqongileyo, ayinguye wonke umntu onesondlo se-RSS esinemithombo engama-25 yokwaziswa ngomzuzwana ngamnye. Sinayo loo nto kwincinci nokuba ibonakala ichasene nawe.
Molweni, okokuqala, mabazise ukuba ndiyawuhlonipha kwaye ndiyawuthanda umsebenzi wabo. Andizami ukuba kukhetho olubi, okanye i-troll, inzondo, okanye nantoni na enjalo. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uzame ngaphambi kokwenza naluphi na uphononongo nokuba leliphi inqaku elibuzwayo. Kuyinyani ukuba ayingabo bonke abasebenzisi abaziyo ngamnye wentsebenzo yesiphelo sabo, kwaye silapha kwaye ulapha.
Ayikokugxeka okutshabalalisayo, kodwa umzekelo, kwakweli nqaku linye ufumana into ebhaliweyo ngolu hlobo: «…, oku akuthethi ukuba ungagcina ngokuzigcina ngesandla.», Ndingazichaza? Akunakulinganiswa.
Kwiindaba zakudala, idem, ngokuvumelana ngokupheleleyo ekuhlanguleni "ubuqaqawuli obudala", kubalulekile ukwazi apho sivela khona, ngokungathi kunjalo.
Kucacile i-Aitor, ndiyasiqonda ngokugqibeleleyo isikhundla sakho kunye nokugxekwa okwakhayo kuhlala kwamkelwa kakuhle. Ndifuna nje ukucacisa ngakumbi indlela yethu yokusebenza kwaye kukuba nangona sizama ukukhawuleza kakhulu, ngamanye amaxesha ngenxa yokunqongophala kwexesha, iishedyuli (iindaba ezininzi zisibamba silele eSpain) okanye umbutho ngokulula, izinto zithatha ixesha elide ukuvela kupapashwe. Konke okugqibelele!
Molo kwakhona, uCarmen, njengoko usitsho, kukho abantu abatsha kwinkqubo yokusebenza ye-IOS kunye ne-iPhone kodwa into ethethwa nguNoe iyinyani, le ayisiyonto inye yokukhetha i-IOS kuba oku sele kumiliselwe kumaqonga amaninzi kwaye ayisiyonto intsha okanye efanelekileyo.
Ngaba unokucinga ukuba wenza inqaku elichaza ukuba ulisusa njani ixesha lokugqibela kwi-Intanethi okanye into efanayo, usenza izidenge ngokupapasha ezi zinto kwaye andicingi ukuba uninzi lwabasebenzisi.
Ukuba wenze impazamo xa uyipapasha, akukho nto yenzekayo, ukuvuma nje ukuba kwanele kwaye isihloko siphelile.
Ngoku enye into endiyibona rhoqo kupapasho lwamanqaku, isikhalazo ngokungabeki umthombo apho ukopa khona, uphinde uphinde uncamathisele upapasho.
Ngokuqinisekileyo andizikholelwa kwaye ndibeka umzekelo, ukuba umTshayina osebenza eFoxconn, uyicoca imifanekiso aze ayithumele ngokuchanekileyo.
Into oyenzayo ayilunganga, kuba ukhuphela umxholo weewebhusayithi ezithile kwaye uwushicilele apha, ukuba kwidolophu yam kuthiwa kubela umsebenzi wabanye.
Yonke iwebhusayithi eyaziwayo ibeka umxholo womthombo, ukuba ayingobantu, njengoko abanye abasebenzisi besitsho, bawela kwimpazamo yokucinga ukuba yeyakho.
Ukuthatha ixabiso lomnye akulunganga, masithobeke ngakumbi kwaye silibale ukuba izinto ezenziwe kakuhle zihlala zibonakala kwaye inyani inendlela enye.
Molo, inyani kukuba le ngcaciso indincedile, kodwa phakathi, bandinike nje iphone kwaye inyani kukuba bendisoloko ndinomnyele, ke andazi ukuba ndingawusebenzisa njani, kodwa kumnyeleyo imifanekiso yeekhamera yayi igcinwe kwifolda, i-Facebook kwenye kwaye yayingesap kwenye, ke ukuba umntu othile uthumele into enesiqulatho sesondo kwaye ndibonisa iifoto endizithathe ngekhamera yam ukuya kwilungu losapho, andizukubona iifoto ababendithumele zona. Iphone iyigcina iyonke. Ke bendifuna ukwazi ukuba ngaba ikhona indlela yokuba iifoto zigcinwe ngokuzenzekelayo kwiifolda ezahlukeneyo?
Molo emva kwemini, ngaba ngoku kukho inketho yokubasindisa ngaphandle kokubayi-1 ku-1? kuba 1 ngo-1 ukuba ndifumana ukhetho lokugcina kwi-reel kodwa ukuba ukhetha ezininzi ayizukundivumela.
Molo ekuseni, umbuzo, okwethutyana andikwazi ukugcina umfanekiso ukusuka kwisicelo ukuya kwifowuni, ndicofa kumfanekiso ophezulu ngasekunene kwaye undiphosa ukhetho lokwabelana ngobuso, ndenza ntoni?
Undikhonze !!!!! Enkosi !!! =)))
Enkosi kum nayo indikhonze kakuhle !!
Ndikhangela indlela yokungagcini iifoto kwi-reel kuba bendingazi, kwaye eli nqaku liyafundiswa, yeka ukuphosa izimvo ezimbi kwaye ufunde kuphela izinto onomdla kuzo, bahlobo Enkosi uCarmen ngempendulo yakho! Bss
Enkosi ngokuthumela. Indincede kakhulu. Andiziqondi izimvo ezingalunganga okanye ukugxekwa kwento elungileyo. Kuya kufuneka sibenesimo esingcono ukuba sifuna ukutshintsha umhlaba kunye nesizukulwana sethu.
Kuba xa ifowuni. Ngaba i-iPhone iya kuba nakho ukugcina iifoto ezivela kwimiyalezo ye-wasap kunye neefoto ezenziwe yikhamera yayo kwiifolda ezahlukeneyo?
Enkosi kakhulu, le ncwadi ibindinceda kakhulu. Ukubulisa;
Isitokhwe esilinganiselweyo sezinto zokugcina ii-Apple Watch Series 3 zinokubonelela ngothotho 4
I-Apple ikhupha i-iOS 12.4 Beta 2